TRUESTORY: အစိုးရက ..ဘာလဲ ၊ အတိုက်အခံက ဘယ်လဲ ?
ကျွန်တော့်အထင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်
မြို့တော်ဖနွမ်ပင် က မြန်မာပြည်၏
မက် လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ် ။
အန်ကောဝပ်ကျောင်းတော်ကြီးရှိနေပေမယ့် မြို့တော်ကိုတောင်အဆင့်မြင့်မြင့် ဖြစ်အောင် အနေအထားတစ်ခု ရောက်ဖို့အတော် ရုန်းကန်ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတယ် ။ သို့ပေမယ့် -
ယနေ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာ မြန်မာပြည်ထက် များစွာ တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတာကို မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုပြန်လည်မှီနိုင်မယ့်အဆင့်တစ်ခုရောက်ဖို့က ခုလက်ရှိ အနေအထားနဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါ ။
- အကြောင်းအရင်းက ဘာလဲ ?
- အစိုးရ တစ်ခုတည်းကြောင့်လား ?
- အတိုက်အခံ အင်အားကြောင့်လား ?
ပြည်ပအနောက်အုပ်စုတွေက မြန်မာပြည်ကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။
ပြည်ပ အနောက်အုပ်စုတွေက , မြန်မာပြည် အစိုးရကို, စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပြီး အကြပ်အတည်းတစ်ခုကို ဆိုက်ရောက်စေတယ်။ နိုင်ငံရေး စနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေဖို့ ဖိအားပေးမှုတွေ ဖော်ဆောင် ခဲ့တယ် ။ ဒေါ်စုကို အချုပ်မှ လွတ်လပ်စေဖို့ကလည်း အဓိကအကြောင်းတစ်ခုပါတယ်။
ယခင် စစ်အစိုးရက ပိတ်ဆို့အရေးယူခံရမှုတွေကို မျက်တောင်မခတ်ပဲစစ်အင်အားတိုးတက်စေဖို့ , နိုင်ငံတွင်းငြိမ်ဝပ်ပိပြားစေဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးခဲ့တယ် ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သင့်တဲ့ တကယ့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု
မှာကသိသိသာသာ ကဏ္ဍအစုံမှာ အားနည်း ညံ့ဖျင်းခဲ့တယ် ။ စစ် အင်အားစုတောင့်တင်းခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်းတို့ နိုင်ငံရေး မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို လိုလားတဲ့အချိန်မှာမှ , နေရာဖယ်ပေးမှုတွေကို ပြုလုပ်လို့ ယနေ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးကို ဖော်ဆောင်ခဲ့တယ် , ဆိုတာကျုပ်တို့
ပြည်သူလူထုတွေ မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။
ထိုကာလ တလျှောက်လုံးမှာ လက်တွေ့ကျကျ ခံစားနေရတဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပိတ်ဆို့ အရေးယူ ခံရမှုတွေနှင့် အတူ ဒေသတွင်း အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေက ရွှေတွင်း၊ရေနံတွင်းတွေပေါ်ပေါက်တာထက် ပိုမိုတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ၊ အကျိုးအမြတ်တွေကို ရရှိ သွားခဲ့ရတာတော့ အမှန်ပဲ ။
ပြည်ပ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေက လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ရပြီး မြန်မာ့ရေပိုင်နက် မြေပိုက်နက်တွေ ,ကနေ ကွေ့ဝိုက် ကာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကို ပိတ်ဆို့ထိုးနှက်စေ ခဲ့တယ် ။ မြန်မာပြည်သူ လူထုနဲ့ ,ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အပိုင်း ကဏ္ဍတွေကတန့် သွားခဲ့ရပြီး လုပ်နိုင်သလောက် အရာမထင်ပဲ အသိပညာရှင် , အတတ်ပညာရှင်တွေ ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကပြည်ပကိုရောက်ရှိမြန်မာပြည်က ထွက်ခွာကုန်ကြလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းပြီးဆင်းရဲတွင်းက နက်လာ ခဲ့ရတယ် ။ ပြည်တွင်းက လူငယ်လူရွယ်တွေ
ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ အနာဂတ်က ပြည်ပ ထွက်ပြီးဘဝ အခြေကျအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ဘက် အလွယ်လမ်းကို ဦးတည်သွားတယ် ။
တကယ်တမ်း အဲဒီ ပိတ်ဆို့မှု ပြစ်ဒဏ်တွေကို လက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတာဘယ်သူတွေလဲ? အနစ်နာခံပြီး ကျောကော့အောင် ခံခဲ့ရတာ ဘယ်သူတွေလဲ ? စစ်အစိုးရလည်း မဟုတ်သလို ယနေ့ လက်ပန်းပေါက်ခတ်ပြီး ကြွေးကြော်နေကြတဲ့ အတိုက်အခံဆိုသူတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်လေ, နိုင်ငံရေး အာဏာမက်မောသူတို့ရဲ့ အတ္တ တွေကြောင့်, ပတ္တမြားစစ် ပေမယ့် ကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံက နွံထဲမှာ နစ်ပြီးရင်း နစ် နေခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပိတ်ခိုင်းတဲ့သူက ပိတ်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ စွဲကိုင်ထားသလို ၊ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့သူကလည်း ချုပ်ကိုင်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ချပြပြီး ဗိုလ်နေမြဲ , ကျားနေမြဲ အနေအထားတစ်ခုမှာရှိနေခဲ့ပါတယ် ။
ယခုအချိန်ထိလည်း အင်အားတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ထက် အပြစ် လှည့်ပါတ် တင်နိုင်ရေး , ဘောလီဘောပုတ် နိုင်ရေး ,အရှုပ်ထုပ်ကို မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် လုပ်နေကြတာက နှစ်ဘက်စလုံးမှာရှိနေသေးတယ်လို့ မြင်မိပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ ဖြည့်စွက်ချင်တာက ယနေ့ခေတ်ရဲ့အတိုက်အခံဆိုသူတွေရဲ့ ခေါင်းရှောင်မှုဖြစ်သမျှအကြောင်း
၎င်းတို့အကောင်းဖြစ်နေအောင်သိုးရေခြုံ အနေအထားတစ်ခုပါ ။
ယခု နောက်ပိုင်းမှာ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေ အပေါ် လူထု အမြင်ပြောင်းလဲလာပြီး ထောက်ခံမှု ကျဆင်းလာတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုကို, မွတ်စလင် ကုလားဘက်အား လှည့်ပြီး အကွက် ဆင် ခံရတယ်
လို့ အတိုက်အခံ မွတ်ဘက်တော်သားတွေက သတ်မှတ်ကာ ဟန်လုပ်ဝါဒဖြန့်နေကြပြီး မွတ်စလင်ဝါဒ နဲ့ လူမျိုးရေးကြီးစိုးနယ်ချဲ့လာမှုအားဆန့်ကျင်သူ ရဟန်း ရှင်လူတွေကို , ပြဿနာ ပြန်ရှာ နေကြတဲ့ အနေ
အထားဟာ အတိုက်အခံ ဆိုသူတွေရဲ့ ထပ်ဆင့် ညံ့ဖျင်း သေးသိမ်မှုလို့ပဲ မှတ်ချက်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အမှန်တကယ်က -
သမ္မတဖြစ်ရေးနဲ့ မယောင်ရာ ဆီလူး အကျိုး မထူးနိုင်မယ့် ဥပဒေ ပုဒ်မတွေကို ပြင်ဆင်ရေးအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ အင်အားတွေ ဖြုန်းတီးနေပြီး၊ အခွင့်အရေး ပွင့်လင်းနေရာ ရလာမှု အပေါ်မှာ ၊ တကယ့်လုပ်ဆောင်ရမယ့် တိုင်းကျိုးပြည်ပြု တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးတဲ့အပြင်, ဝေဖန် ခံရမှုတွေကို တုန့်ပြန်ရာတွင်လည်း , အလွန်ညံ့ဖျင်း သေးသိမ်တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကို လှစ်ဟပြသနေသလိုမျိုးတွေ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့မြင် နေရပါတယ် ။
ထိုနည်းတူစွာ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေး အသိပညာ အတတ်ပညာထက်ကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးသား အရာတွေကို အိုးကင်းပူတိုက် အုံကြွမှု တစ်ခုခုဘက်သို့မရောက်မချင်း သွေးထိုး လှုံဆော်မှု ပညာပေး တွေသာ လူထုကိုများစွာ ချပြပြီး လက်တွေ့ နှင့် ကင်းကွာမှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ယနေ့ အတိုက်အခံ ဆိုသူတွေကို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထု တွေက မျက်မုန်း ကျိုးလာရခဲ့ရပြီး ကျားထက် ဆိုးမယ့် သဏ္ဍာန်အဖြစ် မြင်လာတာ အဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရပါမယ် ။
မြန်မာပြည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရမှုနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ထိုးနှက်ချက်များကို ခံခဲ့ရတာကလည်း အတိုက်အခံ ဆိုသူများ ၏ နှုတ်၏ ဆောင်မမှု၊လက်၏ ဆောင်မမှုတွေနဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပါတ် သက်နေ တာက ရှင်းပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ စစ်အစိုးရ အာဏာ ချုပ်ကိုင်မှုလို့ပဲ သတ်မှတ်ပါ။ကြားထဲကငထွားဖြစ်ပြီးဆန်ရင်းအဖွတ်ခံလို့-ခါး ကောင်းကောင်းနာခဲ့ရတာ ပြည်သူလူ ထုပါပဲ ။
ခုလက်ရှိမှာ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုတွေအတော်အတန်ပြန်လည် ပွင့်လာခဲ့ပြီလို့ ဆိုသော်ငြားလည်း
ပြည်သူလူထုတွေက လက်တွေ့မှာ ခက်ခဲနေဆဲ ဆင်းရဲနေဆဲ အနေအထားမှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ခုဆို အတိုက်အခံပါတီကြီး၏ လှုပ်အားတိုးအားတွေနဲ့ ရှေ့သိပ်ရောက်ချင်လွန်းနေတဲ့ အရွေ့တွေကြောင့်လည်း
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးက တည်ငြိမ်မှု ရှိနေပါတယ်လို့ မခေါ်ဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်အချိန်ထပြီး ပွက်လောရိုက်ဦးမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့် နေကြရင်း ပြည်သူလူထု စားဝတ်နေရေးတွေက ပိုပို ခက်ခဲလာတယ်လို့တောင် ဆိုရပါမယ် ။
ဒါတွေကို နှစ်ဘက်လုံးက ,အကွက်ရွေ့ကွက်စိပ်ဆြာကြီး ဆြာမကြီးတွေ , တာဝန်ရှိသူတွေ ပိုလို့တောင် သိပြီး ဖြစ်မှာပါ ။
အစိုးရတွေက ........... ဘာလဲ ?
အတိုက်အခံတွေက ......... ဘယ်လဲ ?